Ogaden News Agency (ONA) – Haya’adda Qaxootiga Ogadenya oo cabasho u gudbiyay haya’adaha qaabilsan
Haya’adda Qaxootiga Ogadenya oo cabasho u gudbiyay haya’adaha qaabilsan
Maalin nimadii isniinta oo ay taariikhduna kubeegnayd 25/11/13 waxaa holl-ka shirarka ee UNta lagu qabtay shir aad umuhiim ah oo ay kasoo qaybgaleen qoomiyadaha laga tira badan yahay ee qoxootiga ku ah wadanka Kenya.
Waxaa shirka lagu casuumay qoxootiga kakala yimid Ogadenia , Oromia, south sudan iyo kuwo kale waxaa shirka soo qabanqaabiyay islamarkaana madasha shirka fadhiyay hay’adaha kala ah UNHCR, LWF, DRA iyo MSF.
Ugu horayn hay’adaha ayaa warbixin ka dhagaystay gudigii qoxootiga ee kasoo qayb gashay shirka waxaana kudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay goobta kasoo jeediyay gudoomiya gudiga qoxootiga ogadenia ( Ogaden Refugee Community Commutee) Cabdi maxamad gaaciye ( c/madoobe ). Wuxuu ka warbixiyay xaalada rasmiga ah ee ay ku sugan yihiin qoxootiga ree Ogadenia ee ku jira xerada iyo baahida gaarka u ah. Gudoomiyaha ayaa soo bandhigay magacyada dad badan oo hada Ogadenia ka yimid oo aan wali helin wax kaar ah. Wuxuu sidoo kale ka warbixiyay dad badan oo xanuuno kala duwan ay hayaan walina ayna hay’aduhu waxba uqabanin.
Waxaa sidoo kale madasha ka hadashay gudoomiye ku xigeenka qoxootiga Ogadenia marwo Faadumo Siyaad waxayna hay’adaha ku canaanatay in ayna wax badan ka qabanin dhibaatooyinka kala duwan ee ay qabaan. Gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka gudiga qoxootiga Ogadenia ayaa sheegay in ay hay’aduhu siinin xuquuqda ay leeyihiin qoxootiga ree Ogadenia sida xuquuqda dadka laga tirada badanyahay. Waxay sidoo kale ay sheegeen in ayna ku jirin dadka tirada badan ee Soomaalida ah iyagoo noqday kuwo aan labada dhinac midna raacsanayn.
Sikastaba ha’ahaatee hay’adihii shirka fadhiyay ayaa ka garaabay waxayna sheegeen in ay qoxootiga ree Ogadenia ku dulmanyihiin xaaladda ay ku sugan yihiin, iyagoon hada kahor helin xuquqdoodii oo lagu waday in ay yihiin dad soomaali ah oo kamid ah dadka tirada badan waxayna balan qaadeen in ay waxbadan ka qaban doonaan baahida jirta ee dadka qoxootiga ah ee S.Ogadenia. waxay goobta sigaar ah isugu barteen gudigii qoxootiga Ogadenia haya’adahaa ka soo qaybgalay shirka waxayna ku balameen wada shaqayn joogta ah